CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 11:21 on 09 Jul to 12:10 on 09 Jul, HD Digital TV Reduced Quality from 11:21 on 09 Jul to 12:10 on 09 Jul. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 today to 18:34 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 yesterday to 18:34 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 17:18 on 24 Jul to 18:34 on 24 Jul. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:51 today, HD Digital TV Reduced Quality from 15:56 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:51 today to 16:37 today, HD Digital TV Reduced Quality from 15:56 today to 16:04 today. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:51 yesterday to 16:37 yesterday, HD Digital TV Reduced Quality from 15:56 yesterday to 16:04 yesterday. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:51 on 26 Aug to 16:37 on 26 Aug, HD Digital TV Reduced Quality from 15:56 on 26 Aug to 16:04 on 26 Aug. [BBC]
CWRTNEWYDD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 15:04 today to 15:38 today, HD Digital TV Reduced Quality from 15:04 today to 15:38 today. [BBC]